Umhlangano womuntu siqu esikhumulweni sezindiza - ISUYI IMPORT AND EXPORT CO., LTD
USuyi unikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene eChina.
Esinye sazo umhlangano wabantu baseChina. Ngemuva kwakho konke, iChina izwe elinabantu abambalwa abakhuluma isiNgisi, ubunzima bungaqala esikhumulweni sezindiza. Sikunikeza umhlahlandlela notolika konke okugoqelwe kokukodwa. Uzohlangana nawe esikhumulweni sezindiza futhi akusize ngokudlulisela ehhotela nomshayeli (notolika)
● kuyokusindisa ezinkingeni
● izosiza ukushintshaniswa kwemali
● ukuthengwa kwe-sim card
● ngena ehhotela
● izonikeza imininingwane yokuqala edingekayo
● izokonga isikhathi nobunzima.
Phakathi kwabasebenzi bethu kunabantu abavela eChina naseCIS. Abantu asebenesikhathi eside behlala eChina bangatshela ukuthi kufanele baye kuphi, babone ini, futhi, babe nezinga eliphakeme lolwazi lolimi.
Ukubhuka igumbi, ukuhlangana nokuphelezelwa kusuka / esikhumulweni sezindiza noma esiteshini sesitimela
Singakwazi ukubhukhela igumbi bese sihlela umhlangano futhi siphelekezele ngokohlelo lwakho. Vumela umphefumulo wakho uzolile ngalezi zinto ezincane futhi ungasebenza ngokuthula, wonge isikhathi futhi wandise ukusebenza kahle kohambo lwakho oluya eChina.